आजभोलि शैक्षिक जगत्को महत्त्वपूर्ण पक्ष शिक्षकका विषयमा अनेकौं कुरा उठिरहेका छन् । सरकारी र निजीक्षेत्रका शिक्षकका कामकारबाही, गतिमति, स्थापन–विस्थापन आदि सन्दर्भमा बहसहरू चलिरहेका छन् । ती सबैमध्ये एउटा होे शिक्षकको सम्मान । भौतिक सुखसुविधा र अभौतिक मानसम्मानबाट आनन्द प्राप्त गर्न खोजिरहनु नै मानिसको स्वाभाविक र आधारभूत प्रकृति हो । त्यसैले एउटा मानिसले जीवनमा धन र कीर्ति दुवै कमाउने धार समात्छ । यद्यपि यसका आयामहरू फरक फरक हुन्छन् । कुनै मानिस शिक्षक छ भने उसको जीवनको उद्देश्य यही हुन्छ । मात्रात्मक र गुणात्मक भिन्नता अवश्य होला, तर सबै शिक्षकलाई पैसा पनि अपुग नै भइरहेको हुन्छ । समाजबाट प्राप्त गर्नुपर्ने मान सम्मानको भोक पनि यस वर्गलाई धेरै हुन्छ ।
मानिस जातिको आदिकालदेखि प्राकृतिक, जैविक वंशानुगत, सामाजिक र विस्तारै प्राविधिक रूपमा पनि विचारहरू पुस्तान्तर हुँदै गएर आजको चेतनाको स्तर निर्माण भयो, जुन प्रक्रियाको मानवीय माध्यम शिक्षक हो । मानिसका यिनै विचार र बुद्धिअनुसार अनेकौं काम गरिएर आजको भौतिक र भावनात्मक संसार बनेको हो । त्यसैले आज यस दुनियाँमा अस्तित्वमा रहेका जति पनि विचार, वाद, शीप, सूत्रहरू छन्, भय, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता नकारात्मक भनिएका र दया माया सद्भाव, खुशी, आनन्द, परमानन्द जस्ता सकारात्मक भनिएका भावहरू छन्, ती सबैका पछाडि प्राचीनकालका साधक ऋषि, महर्षि, गुरु, सद्गुरुदेखि आजका अध्यापक, प्राध्यापक, प्रशिक्षक, सहजकर्ता, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार आदि सबैखाले शिक्षक छन् । यसका अलावा शिक्षक हाम्रो समाज र संस्कृतिको अभिन्न अंगको रूपमा विकसित हुँदै आएको भए पनि ज्ञानको ज्योति दिने गुरुदेखि कुनै सानोदेखि ठूलो काम सिक्न सघाउने यूट्युब भिडियोहरू पनि शिक्षक बन्दै गए । हिन्दू धर्मग्रन्थमा ठाउँ–ठाउँमा मानिसबाहेकको अन्य प्राणी अप्राणी कुनै पनि असल गुरु वा शिक्षक भएको उल्लेख गरिएको छ । यस अतिरञ्जनातिर जानुभन्दा कुरा शिक्षक सम्मानको मात्र गरौं ।
हिजोआज कञ्चनपुरमा एउटा घटनाको चर्चा छ । शिक्षकहरूको कुटाइबाट एउटा बालक मरेको आरोप छ । मानिसहरू ती शिक्षकहरूप्रति घृणाभाव व्यक्त गरिरहेका छन् । अर्कोतिर सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रका विद्वत्वर्ग शिक्षाक्षेत्रको सुधारमा शिक्षकको भौतिक अभौतिक सेवासुविधा वृद्धिको कुरा उठाइरहेका छन् । शिक्षकहरूलाई हेर्दा केहीले एउटा तथा कथित आदर्श फलाक्छन्– प्राचीन गुरुले शैशिक्षकले धनको लोभ पनि गर्नु हुँदैन, मान सम्मान पनि मागिरहनु हुँदैन । एउटा महान् त्याग, तपस्या र साधनाले दीक्षित व्यक्ति नै शिक्षक हुन योग्य हुन्छ । अर्को कुनै प्राध्यापकको तर्क होला– शिक्षक विशुद्ध व्यावसायिक हुनुपर्छ, सामाजिक सुधारको नेतृत्वकर्ता हुनुपर्छ । त्यसैमा शिक्षकमा लेख्ने–पढ्ने गुणले लेखक, साहित्यकार, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिक पनि भइरहेको हुन्छ । यति मात्र होइन, यस्ता कयौं अन्य धारहरू पनि छन् । तर यथार्थमा मानिसले कुन समयकालमा कुन शिक्षकको कुन सम्मानको कुरा गर्छन्, विश्लेषण गरिनुपर्ने चाहिँ त्यो हो । मैले धनगढीमा आमरूपमा परिचित निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा विगत १२ वर्षदेखि काम गरेको छु । त्यहाँ मैले काम गरिरहँदा कुन रूपमा कति सम्मान पाएँ, त्यो मेरो व्यक्तिगत अनुभूति हो । त्यस्तै अब म सरकारी क्षेत्रमा तथाकथित स्थायीका रूपमा जाँदै छु र त्यहाँ कस्तो सम्मान पाइएला भन्ने कुराको पनि सहजै अनुमान गरिरहेको छु । म जान्दछु, हरेक व्यक्तिका अनुभूति फरक हुन्छन् । तर विद्वान्, बहसकर्ता र सरकारी नीति निर्माताहरूले गरिरहेको बुद्धिविलास र मेरो व्यक्तिगत अनुभवको तारतम्य ठ्याक्कै फरक छ ।
नेपाली समाजमा एउटा शिक्षक शिक्षण मात्र नभई अन्य काममा पनि लागेको हुन्छ । उसको व्यक्तिगतभन्दा पनि पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक आवरण र आबद्धताले उसलाई तीतामीठा अनुभूतिहरू प्राप्त भइरहेका हुन्छन् । विशुद्ध रूपमा शिक्षणद्वारा उसका विद्यार्थीले ऊप्रति बनाएको धारणा एउटा शिक्षकका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा पहिलो कुरा त कुनै शिक्षकले मेरा विद्यार्थीले मलाई कति सम्मान गर्छन् भनेर सोच्नुभन्दा पहिले मैले मेरा शिक्षकलाई कति सम्मान गर्थें र गरिरहेछु भनेर सोच्नु आवश्यक हुन्छ । दोस्रो कुरा, आप्mनो कामबाट म मेरो अन्तःकरणदेखि नै सन्तुष्ट छु कि छैन भनेर सोच्नुपर्छ । यसरी नै तेस्रो कुरा, चौथो कुरा, पाँचौं गर्दागर्दै थुप्रै दार्शनिक विचारको बाढी तयार होला, जसमा शिक्षकको सम्मानको बहसको डुंगा तैरिरहेको छ ।
शिक्षकको सम्मानको अर्को पाटो के हो भने कुनै शिक्षकले अरू व्यक्ति, पेशाकर्मी, कर्मचारी वा नेता तथा शासकभन्दा कम वा बढी कति सम्मान कहाँ र कसरी पाएको छ ? आजकाल सञ्चारमाध्यममा सुनिएको छ– आजको विकसित भनिएको कुनै देशका डाक्टर, इन्जिनीयर तथा अन्य पेशाकर्मीद्वारा शिक्षकबराबर वा उनीहरूको भन्दा बढी सुविधा, मानसम्मान आफूहरूको नभएको गुनासो गरिँदा त्यस देशकी प्रमुख शासकले भनेकी रहिछिन्, ‘तपाईंहरूलाई पनि तिनै शिक्षकले बनाएका हुन् नि ?’ सम्मान असम्मान भनेकै अमुक अमुक व्यक्तिप्रति समर्पण भावको तुलना हो, जस्तै– कुनै गाउँमा एउटा नेता र एउटा शिक्षकमध्ये कसलाई गाउँलेहरूले बढी आदर गर्छन् ? त्यस्तै एउटा साहू र शिक्षकमा कसले भनेको सबैले मान्छन् ? हाम्रो गाउँघर तथा शहरको बदलिँदो परिस्थितिहरूमा शिक्षकको सम्मानका लागि सरकारले र निजीक्षेत्रले दिने पुरस्कार, पदवी, नगद तथा अन्य अवसर जस्ता केही औपचारिकता पनि रहेकै छन् ।
शिक्षकको सम्मानको अर्को रोचक प्रसंग के हो भने शिक्षक हजारौं लाखौं सम्मानले हावा भरिएको बेलुनझैं फुकेको हुन्छ । एउटै पनि असम्मानले च्वास्स घोच्दा फुटेर आकारविहीन बन्न जान्छ । तर राजनेता वा अन्य केही पेशाकर्मीहरू चाहिँ आफूभित्र सम्मानको फलामे आकृति बनाउछन्, जसमा कसैले थुके पनि दाँत देखाएर हाँस्न सक्छ, माला लगाइदिए भने गर्वले कुर्लन्छ । स्वाभिमान र अभिमानको फरक पनि यसरी नै हुन्छ ।
शिक्षकको सम्मान किन र कसरी गर्ने भन्ने विषय अत्यधिक सान्दर्भिक भएका बेला विचारको बहसले भन्दा हार्दिक भावले बढी महत्त्व राख्दछ । सामान्यतः कुनै शिक्षकमा कुनै घमण्ड नहुँदा ऊप्रति मानिसहरू आग्रही हुँदैनन् । तर कत्ति पनि घमण्ड गर्दिनँ भन्ने घमण्डले भने झन् मानिसहरू आग्रही–पूर्वाग्रही हुन्छन् । हरेक शिक्षकले बुझेको हुन्छ कि, आजका विद्यार्थी अवश्य पनि शिष्य होइनन् । त्यसो हुँदा गुरुदक्षिणामा सम्मान खोज्न पनि मिल्दैन । अतः आजभोलि चलिरहेको शिक्षकको सम्मानको कुरा बकम्फुसे गफ र असमञ्जस समाजको ढोँगी चरित्र विकास गर्ने खेल मात्र भएको देखिन्छ ।